အစ္စရေး-ပါလက်စတိုင်း တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် တစ်ပတ်အတွင်း သေဆုံးသူ ၂၀၈ ဦး နှင့် ဒဏ်ရာရသူ အနည်းဆုံး ၁,၅၀၀ ဦးရှိဟု ကုလသမဂ္ဂပြော - Xinhua News Agency
ကုလသမဂ္ဂ၊မေ ၁၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အစ္စရေး-ပါလက်စတိုင်း တိုက်ပွဲများကြောင့် တစ်ပတ်အတွင်း သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ၂၀၈ ဦး နှင့် ဒဏ်ရာရသူ အနည်းဆုံး ၁,၅၀၀ ဦး ခန့်ရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုအစီစဉ်များက မေ ၁၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။အစ္စရေးတို့၏ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် မေ ၁၇ ရက် ညနေပိုင်းအထိ (၇ ရက်တာ) တစ်ပတ်အတွင်း ကလေးငယ် ၅၈ ဦး အပါအဝင် သေဆုံးသူ ၁၉၈ ဦး နှင့် ဒဏ်ရာရသူ ၁,၃၀၀ ရှိကြောင်း ပါလက်စတိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဂါဇာမှနေ၍ ပါလက်စတိုင်းတို့၏ ဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အစ္စရေးဘက်က လူ ၁၀ ဦး သေဆုံးပြီး ရာပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း အစ္စရေးက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု(OCHA) အဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်များအား အကူအညီပေးနေသည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော (UNRWA) က ဂါဇာကမ်းမြောင်တစ်လျှောက်ရှိ စာသင်ကျောင်း ၅၀ တွင် စစ်ဘေးရှောင် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး ၄၂,၀၀၀ ကျော်ကို နေရာချပေးထားကြောင်း ဆိုသည်။
အဆောက်အဦ ၉၄ လုံး နှင့် လူနေအိမ်ယာ ၂၈၅ လုံး ဆိုးဆိုးရွားရွား ပျက်စီးသွားခြင်း နှင့် လုံးဝနေထိုင်၍ မရနိုင်အောင် ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်ဟု ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူ့လုပ်ငန်းခွင်နှင့်အိုးအိမ်ဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ OCHA က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ လူပေါင်း ၂,၅၀၀ ကျော်မှာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားကြောင်း လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Shelter Cluster က ဖော်ပြခဲ့သည်။
စာသင်ကျောင်းများ ၊ မူကြိုကျောင်း နှစ်ကျောင်း ၊ UNRWA သက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းကျောင်းတစ်ခု အပါအဝင် ပညာရေးအဆောက်အဦ ၄၁ လုံး ထိခိုက်ပျက်စီးသွားကြောင်း ပါလက်စတိုင်း ပညာရေးညွှန်ကြားမှု ဝန်ကြီးဌာန နှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးဦးစီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းက ဆိုသည်။
အစိုးရ ပြည်သူ့ဆေးရုံ ၄ ရုံ ၊ အစိုးရမဟုတ်သော ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံး ၂ ရုံ ၊ ဆေးခန်း ၂ ခု ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာန တစ်ခု နှင့် ပါလက်စတိုင်းလခြမ်းနီအဖွဲ့ရုံးတစ်ခုလည်း ပျက်စီးသွားကြောင်း ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
ဂါဇာတစ်ဝှမ်းတွင် တစ်ရက်လျှင် ၆ နာရီမှ ၈ နာရီအထိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း အချို့ပို့ဆောင်ရေးလမ်ကြောင်းများလည်း ရပ်တံ့သွားခဲ့ကြောင်း ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အပေါ် သက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကြောင်း နှင့် သောက်သုံးရေ ၊ ကျန်းမာရေး စနစ်နှင့် မိလ္လာစနစ် များအပါအဝင် အခြားမရှိမဖြစ်လိုသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများစွာလည်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း OCHA က ဆိုသည်။ အစားအစာနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုလိုအပ်ချက်မှာလည်း မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂ နှင့် လူသားချင်းစာနာမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက ဂါဇာရှိ အိမ်ယာစွန့်ခွာထွက်ပြေးသူများအတွက် အစားအစာ နှင့် အစားအစာမဟုတ်သောအခြားအသုံးအဆောက်များကို ပံ့ပိုးပေးနေပြီး လူပေါင်း ၅၂,၀၀၀ ကျော်ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများလည်း ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။
ထို့ပြင် ၎င်းတို့က စစ်ဒဏ်သင့် ပြည်သူများအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးနေပြီး စစ်ပွဲအတွင်း ပေါက်ကွဲမှု နှင့် အပျက်အစီးပုံများအကြား သွားလာရာတွင် ဘေးအန္တရာယ်မြင့်မားပုံကို အထူး အလေးဂရုပြုကြရန် ပညာပေးဆွေးနွေးမှုများလည်း ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
အထူသဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်မြင့်အဆောက်အဦများအား မကြာသေးခင်က အစ္စရေး၏ အချို့သော လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာမှု ဥပဒေအောက်တွင် ခွဲခြားရှောင်ရှားမှုမရှိခြင်း နှင့် အချိုးအစားမညီမျှခြင်းများရှိနေသည့်အပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုမြင့်တက်နေသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးက ဆိုသည်။ အလားတူ အစ္စရေးနိုင်ငံအတွင်းရှိ အရပ်သားပြည်သူ လူနေထူထပ်သော ရပ်ကွက်များထဲသို့ ဂါဇာဘက်မှနေ၍ ဒုံးကျည်များ ၊ မော်တာလက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်မှုများမှာလည်း ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
အရှေ့ဂျေရုဆလင် အပါအဝင် အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် ပြီးခဲ့သော စနေနေ့ ( Nakba နေ့)တွင် နေရာအနှံ့အပြား၌ အစ္စရေး နှင့် ပါလက်စတိုင်းအကြား ပဋိပက္ခထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုများ နှင့် ဆန္ဒပြပွဲများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း OCHA က ဆိုသည်။ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး နှစ်ဦး သေနတ်ပစ်ခံရပြီး အစ္စရေးစစ်သားတစ်ဦး အသတ်ခံရကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင်လွန်ခဲ့သော လေးရက်က Hebron ၌ အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့၏ ပစ်ခတ်ခြင်းခံရသော အခြားအမျိုးသားတစ်ဦးမှာလည်း သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
UNITED NATIONS, May 17 (Xinhua) — UN humanitarians said Monday that 208 people were killed and at least 1,500 injured inaweek of Israeli-Palestinian hostilities.
The Gaza Ministry of Health reported that 198 people died – including 58 children – and 1,300 injured in seven days of bombardments by Israel, ending at noon local time. Israel reported 10 people killed and hundreds more injured by Palestinian rocket attacks launched from Gaza, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) said.
In the West Bank, including in East Jerusalem, widespread demonstrations and clashes between Palestinians and Israeli forces broke out in multiple locations in commemoration of Nakba Day on Saturday, OCHA said. Two Palestinians were shot and killed by Israeli forces. Another boy died after having been shot four days previously in Hebron by Israeli forces. Enditem
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ် ၊ နော်ဝေ နှင့် တူနီးရှား အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်တို့က ပါလက်စတိုင်း-အစ္စရေး ပဋိပက္ခအခြေအနေ နှင့် ပတ်သက်၍ အတူတကွ ဆွေးနွေးမှုကို ထုတ်ပြန်ကြေညာ